Maamulka Ahlu Sunna ee gobolka Galguduud oo amaro dadku la yaabeen soo saarey – SBC
Maamulka Ahlu Sunna ee gobolka Galguduud oo amaro dadku la yaabeen soo saarey
Maamulka Ahlu Sunna Waljameeca ee gobolka Galguduud ayaa amaro ay si weyn ula yaabeen dadka deegaankaasi ku soo rogay aroosyada & farxadiisa.
Hadal ka soo baxay maamulka Ahlu Sunna ee degmada Caabud-Waaq ayay ku sheegeen waa sida hadalka loo yiriye in degmada ay ka dhacaan aroosyo fasahaad ah oo aan loo baahneyn in la dhigo aroosyadaasi oo kale, waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in dadka is aroosyada & kuwa ka qayb galaya damaashaadka arooska inay yareeyaan buuqa & sawaxanka.
Sarkaal ka tirsan maamulka Ahlu Sunna ee deegaankaasi ayaa sheegay in lagu amarayo dadka is aroosa inaanay guryaha ku jirin mudada 7 cisho ee ay Soomaalidu dhaqan ahaanta u leedahay ee loo yaqaan “Todobo baxa”, isagoo sarkaalkaasi sheegay in caadadaasi aanay sal ku laheyn diinta oo ay tahay wax aan loo baahneyn.
Waxaa kaloo amaradaasi ka mid ah in dadka aroosyada u adeegsada gawaarida faraha badan ee galbiska ah aanay 3 gaari ka badan lagu galbin karin aroosyada, hadii ay taasi dhacdana ay ganaax ku soo rogi doonaan gawaarida iyo dadka is aroosyaba.
Amarkan ayaa dadka deegaankaasi waxay ku sheegeen in uu yahay mid ay aad ula yaabeen, iyagoo ku dooday inay tahay farxada & alalaska aroosku mid ka mid ah damaashaadka arooska.